Waxaa shaaca laga qaaday faahfaahinta cusub ee dillaacday ee Samsung Galaxy J4 | Androidsis
La J taxane qoyska Samsung Galaxy ayaa ku dhow inay helaan Samsung Galaxy J4, xubinta cusub ee imaan doonta waqti aad u yar. Maalin kasta oo dhaafta, waxaa muuqata in dhamaadka hoose ee soo socda uu imaan doono, waxayna ku sameyn doontaa hab muxaafid ah iyadoo loo mahad celinayo astaamaheeda iyo qeexitaankiisa farsamo ee, in kasta oo ay run tahay inaysan ahayn kuwo awood leh ama mudan in la amaano, waxay ku ballaarineysaa buuga gundhigga shirkadda qaab beddelid ah.
Sida laga soo xigtay xogtii ugu dambeysay ee la shaaciyay, qalabkani wuxuu ku yimaadaa qalab processor afar geesle ah, wax aan maanta soo jiidanaynin dareenka badan ee ku dhex jira barnaamijyo aad u tiro badan, ciyaaro iyo waxyaabo badan oo badan oo baahi badan leh.
Samsung Galaxy J4 (SM-J400), marka loo eego waxa barta tilmaamtay WinFuture, wuxuu ku yimaadaa qalab shaashaddiisu tahay 5.5-inch HD Super AMOLED oo leh xalka pixels 1.280 x 720, Muuqaal ay soo bandhigtay qaabka caadiga ah ee 16: 9 kaas oo, ilaa waqti aan fogayn, uu ahaa astaamaha ugu muhiimsan ee taleefanno badan oo suuqa soo galayay.
Gudaha, Waxaa la tilmaamay in taleefankani uu xambaarsan yahay processor Samsung Exynos 7570 afar geesle ah oo loogu talagay saacad ugu badnaan ah 1.3GHz, Xusuusta RAM ee 2 ama 3GB oo awood ah, 16 iyo 32GB oo ah meel kaydinta gudaha ah oo taageerta ballaarinta iyada oo loo marayo kaarka microSD iyada oo aan wax xaddid ah lahayn, iyo, marka loo eego batteriga, waxay leedahay batari 3.000mAh ah.
Dhinaca kale, Waxay ku socotaa Android 8.0 Oreo oo ay weheliso lakabka u-habeynta Samsung Experience, waxay leedahay laba taageero oo SIM ah, akhristaha faraha, Bluetooth 4.1, 4G LTE, dhumucdiisuna waa 8.1mm, iyo kamaradaha kamaradaha, waxay ku dhejisaa hal 13-megapixel dareemayaal gadaal awood u leh in lagu duubo 1.080p iyo mid kale oo 5MP ah hore. Inta soo hartay, waa inaan sugnaa faahfaahin dheeraad ah iyo xaqiijinta shirkadda Kuuriyada Koonfureed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Faahfaahin cusub oo xaday Samsung Galaxy J4 ayaa shaaca ka qaaday